GỤỌ NKE Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mongolian Moore Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
OZI ỌMA anyị na-ekwusa dị mkpa, baakwa uru. Ma, ọ bụghị ndị niile anyị na-ezi ya ghọtara na ọ dị mkpa. Ọ bụrụgodị ndị nwere mmasị n’ihe Baịbụl kwuru, mgbe ụfọdụ, ha anaghị aghọta na ọ dị mkpa ka anyị na ha na-amụ Baịbụl.
Dị ka ihe atụ, otu nwoke aha ya bụ Gavin malitere ịbịa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ma, ọ chọghị ka a mụwara ya Baịbụl. O kwuru na ya amachaghị Baịbụl nakwa na ya achọghị ka ndị ọzọ mata na ya amachaghị Baịbụl. Ọ sịrị na ya achọghị ka a ghọgbuo ya ma ọ bụ tụwa anya ka ya na-abịa chọọchị. Gịnị ka i chere? È mechara nyere Gavin aka? Chegodị uru ihe Baịbụl na-akụzi nwere ike ịbara mmadụ. Jehova sịrị ndị Izrel: “Okwu m ga na-adasị dị ka igirigi, dị ka mmiri nke na-avụsị n’elu ahịhịa.” (Diuterọnọmi 31:19, 30; 32:2) Ka anyị leba anya n’ihe ụfọdụ banyere igirigi ma jiri ya tụnyere ozi ọma anyị na-ekwusa, ka anyị nwee ike inyere “ụdị mmadụ niile” aka.—1 Timoti 2:3, 4.
OLEE OTÚ OZI ỌMA ANYỊ GA-ESI DỊ́ KA IGIRIGI?
Igirigi na-ada nwayọọ nwayọọ. Igirigi na-esi n’urukpuru dị́ na mbara igwe ada nwayọọ nwayọọ. Olee otú okwu Jehova si “na-adasị dị ka igirigi”? O weturu obi, jiri obiọma gwa ndị ya okwu otú na-egosi na ihe banyere ha na-emetụ ya n’obi. Anyị na-eṅomi ya ma ọ bụrụ na anyị ana-akwanyere ihe ndị ọzọ kweere ùgwù. Anyị na-agba ha ume ka ha chebara ihe ha kweere echiche, jirikwa aka ha kpebie ihe ha ga-eme. Ọ bụrụ na anyị ana-egosi ndị mmadụ na anyị na-echere ha echiche ọma, ọ ga-eme ka ha kweta ihe anyị na-agwa ha, ozi ọma anyị na-ekwusa ana-abakwu uru.
Igirigi na-eme ka ahụ́ ruo ndị mmadụ ala. Ihe ga-eme ka ozi ọma anyị na-ekwusa mee ka ahụ́ ruo ndị mmadụ ala bụ ma anyị na-eche banyere ụzọ dị́ iche iche anyị ga-esi enyere ha aka ịmụta eziokwu Baịbụl. Onye mbụ gwara Gavin ka ya mụwara ya Baịbụl bụ otu nwanna aha ya bụ Chris. Ma, ọ manyeghị Gavin ka o kweta ịmụ ihe. Kama ime otú ahụ, o si n’ụzọ dị́ iche iche gbalịa ka ahụ́ rukwuo Gavin ala mgbe a na-ekwurịta gbasara Baịbụl. Chris gwara Gavin na e nwere otu ihe dị́ mkpa Baịbụl kwuru malite na Jenesis ruo Mkpughe nakwa na ịmata ihe a ga-enyere ya aka ịghọtakwu ihe a na-amụ n’ọmụmụ ihe. Chris gwaziri ya na amụma ndị e buru na Baịbụl mere ka ya kweta na ihe Baịbụl na-ekwu bụ eziokwu. Ihe a ọ gwara ya mere ka ha kwurịta ọtụtụ ugboro banyere otú amụma ndị e buru na Baịbụl si mezuo. Ihe ndị ha kwurịtara mere ka ahụ́ ruo Gavin ala, ya emechaa kweta ka a mụwara ya ihe.
Igirigi na-eme ka ihe a kụrụ akụ dị́ ndụ. N’oge ọkọchị n’Izrel, ebe niile na-ekpo ọkụ. E nwere ike ịnọcha ọtụtụ ọnwa, mmiri agaghị ezo. A sị na igirigi anaghị ada, ahịhịa na ihe a kụrụ akụ ga-akpọnwụ. Jehova buru amụma na n’oge anyị a, ọ ga-adị ka è nwere ụkọ mmiri ozuzo, ya bụ na akpịrị ga na-akpọ ndị mmadụ nkụ “ịnụ okwu Jehova.” (Emọs 8:11) O kwere nkwa na ndị e tere mmanụ “ga-adị ka igirigi nke si n’ebe Jehova nọ” ka ha na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke, “atụrụ ọzọ” ana-akwado ha. (Maịka 5:7; Jọn 10:16) Ozi ọma anyị na-ekwusa so ná ndokwa Jehova mere iji mee ka ndị eziokwu Baịbụl na-agụsi ike nweta ndụ. Ànyị ji ozi ọma a kpọrọ ihe?
Igirigi bụ ngọzi sí n’aka Jehova. (Diuterọnọmi 33:13) Ozi ọma anyị na-ekwusa nwere ike ịbụrụ ndị nabatara ya ngọzi. Ịmụ Baịbụl bụụrụ Gavin ngọzi maka na o nyeere ya aka ịmata azịza ajụjụ niile ọ na-ajụ. O mewere nke ọma n’egbughị oge, e mee ya baptizim. Ugbu a, obi na-adị ya na nwunye ya bụ́ Joyce ụtọ izi ndị ọzọ ozi ọma Alaeze Chineke.
Ndịàmà Jehova na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke n’ụwa niile
JIRI OZI ỌMA GỊ KPỌRỌ IHE
Iji ozi ọma anyị na-ekwusa tụnyere igirigi nwekwara ike inyere anyị aka ịghọta na mbọ anyị na-agba n’ozi ọma bara uru. Olee otú o si baa uru? Ọ bụrụ na mmiri atasa n’ala ugboro ole na ole, o nweghị ezigbo uru ọ ga-aba. Ma, ọ bụrụ na o zosie ike, ọ ga-ede ala nke ọma. Otú ahụ ka ozi ọma anyị na-ekwusa dị. O nwere ike ịdị anyị ka ozi ọma anyị na-ekwusa enweghị ihe ọ bụ. Ma, mbọ niile ọtụtụ nde ndị ohu Jehova na-agba na-eme ka ọ bụrụ àmà “nye mba niile.” (Matiu 24:14) Ozi ọma anyị na-ekwusa ọ̀ ga-abụrụ ndị ọzọ ngọzi sí n’aka Jehova? Ee, ma ọ bụrụ na ozi ọma anyị adị ka igirigi nke na-ada nwayọọ nwayọọ, na-eme ka ahụ́ ruo mmadụ ala, na-emekwa ka ihe a kụrụ akụ dị́ ndụ.